ABOn paartii biyyoolessaa (National Party) ta'ee galmaa'e. Kana jechuun: Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABOn paartii biyyoolessaa (National Party) ta’ee galmaa’e. Kana jechuun:
– Bakka ummanni keenya keessa jiraatu Naannoo Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Hararii, Naannoo Kibbaa, Raayyaa, Magaalaa Finfinnee fi bakka adda addaatti ummata keenya ni gurmeessa, leenjisa, sirnaan bakka bu’aa dhugaa akka qabaataniif qabsaa’a.
– Paartilee akeeka, mul’ataa fi galma waloo nu waliin qaban waliin kan haasofnu sadarkaa biyyoolessaatti humnaa fi sadarkaa Oromoo madaaluuni.
– Carraa kanaan humni Oromoo daran akka jabaatu, hirmaannaan inni siyaasa keessatti qabus daran akka dabalu taasisa.
#ABOn akka Guutummaa #Ethiopiatti dorgomuuf Hayyama Biyyoolessaa argate. #ABO hundatu Ragaa Argate
Bakka kaaneef qabna. Bakka gahuuf deemnus beekna. Imala irra jira…. bakka sanas ni geenya..
ሀገር አቀፍ????? ፓርቲ??
finfinnee, adaamaa, shashimaannee, jimma, asallaa fi magaalota oromiyaa heddu keessatti amaara ykn አብን mosisuuf shira xaxame fakkaata. Fakkeenyaaf OLF Oromiyaa ala deemee waan ijaaratu hin qabu. Amaarri garuu magaalota oromoo heddu dhuunfachuuf deemti.
Amma ammaatti dhaaba oromoo beekamaa ABO galmeessu didanii waajjira jalaa cufaa miseensa ‘saa hidhaa turan. Amma dhaaboleen oromoo hundi walitti dhufuuf yaali goonaan tokko tokkoon yaamani seertifikeeta raabsuu eegalani. Tokkomnu malee kara karaa fiignee eessa ‘yyuu hin geenyu.
Via: Orombiyyaa Oromoo